Gbasara anyị - Dongguan City BiGa Grating Machinery Co., Ltd.
Dongguan City Biga ji kpachie oghere Machinery Co., Ltd.guzobere na 1996, anyị na-aga n'ihu, ugbu a bụ isi azụmaahịa bụ: nyocha na mmepụta nke ọnụọgụ ọnụọgụ, magnetik ọnụ ọgụgụ Digital Readout system, igwe na-egweri igwe, igwe na-egweri igwe, EDM oghere igwe, igwe eji egwu waya EDM, ihe oyiyi onyogho, 3 axis / 5 axis machining center, laser ịcha igwe, carves-egwe ọka na EDM igwe. Banyere ọrụ mgbe ire ere, nkwado ntanetị, nkwado teknụzụ vidiyo, Akụkụ ihe eji akwụ ụgwọ, ntinye ntinye, inye ọrụ na ọzụzụ, A ga-enye nlekọta na ịrụzi ọrụ mpaghara. N'ihi ọrụ na-ekwesịghị ekwesị na-eduga ná mmebi, rụziri ngwa ngwa na-na na na na-eri price na asịwo.
Na 2000, anyị wuru ụlọ ọrụ EDM na Dongguan, ruo ugbu a anyị nwere afọ 20 na-emepụta ahụmịhe na afọ 10 na mbupụ mbupụ. Usoro niile gụnyere imepụta akụrụngwa igwe, mgbakọ na nyocha nyocha zuru oke dịka ọnọdụ njikwa SOP (Usoro Arụ Ọrụ). N'ihe gbasara akụrụngwa, anyị na-eji akụkụ ahụ dị elu nke sitere na Germany, Japan, Taiwan na Switzerland. Onye nrụpụta dị mkpa ga-enwerịrị ntụkwasị obi, onye nwere ikike na ikike ibu ọrụ; Banyere njikwa njikwa ngwaahịa, yana nyocha nke akụrụngwa dị elu sitere na United States (API) na Japan (NIKON), a na-ekwe nkwa dị mma.
Companylọ ọrụ anyị na-ejide iwu nke ọrụ mmachi na ogo dị mma na-agbaso site na ịdị mma na izu okè. Anyị anọwo na-agbaso ọrụ pụrụ iche achikota na sayensị na teknụzụ dị elu. Iji mezuo ebumnuche ndị a, ụlọ ọrụ anyị ga-eme mmemme ọrụ ahaziri iche dị ka ọchịchọ onye ahịa ọ bụla si dị, si otú a na-enyere ndị ọrụ aka iru ihe mgbaru ọsọ ha n'ụzọ ziri ezi.
Ahịa anyị na-ekpuchi Hong Kong, Taiwan, Singapore, South Korea, Turkey, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East Asia, India, Europe, America, wdg Anyị nwere ike ịnye ọrụ mmezi na Vietnam. Ugbu a, anyị nwere ọ networkụ zuru oke na netwọk ọrụ ụlọ. The isi n'ógbè, na itieutom na ngalaba nke mgbe-ire ọrụ, na-enye ndị mbụ na klas ọrụ maka ndị ahịa. Anyị ji ezi obi na-atụ anya ma na-ekwe nkwa na mbọ anyị ga-eme ka ndị ahịa anyị nwee afọ ojuju.
Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Mkpa egweri igwe, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Single Head Mkpa egweri Machine, Gantry Type Mkpa egweri igwe, Gantry Double-End Mkpa egweri Machine,